Spectrocoin डेबिट कार्ड समीक्षा - Bitcoin कार्ड तुलना 2018
Spectrocoin डेबिट कार्ड समीक्षा
Spectrocoin.com प्रयोगकर्ता Bitcoin लागि सबै-मा-एक सेवाहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ. एक Bitcoin वालेट छेउमा, तिनीहरूले विनिमय सेवाहरू प्रदान, एक Bitcoin डेबिट कार्ड, र व्यापारीहरु को लागि एक समाधान उनीहरूको दैनिक व्यापार गतिविधिहरु मा Bitcoin स्वीकार. यसको ग्राहकहरु लागि सेवा Bitcoin एक उच्च गुणस्तरीय सिर्जना गर्न infrastructural comprehensiveness संग संयुक्त प्राविधिक विश्वसनीयता Spectrocoin.
सेवाहरू Spectrocoin प्रदान
Spectrocoin संसारभरि Bitcoin प्रयोग गर्न गर्ने कुनै को अगाडि-गर्न-फिर्ता सेवाहरू प्रदान. तिनीहरूले एक Bitcoin ई-वालेटमा सिधै आफ्नै मुद्रा मा खरिद bitcoins सञ्चालित गर्न सकिन्छ भनेर. यो Bitcoin डेबिट कार्ड खर्च bitcoins फिएट मुद्राहरू जस्तै सजिलो बनाउँछ. कम्पनी पनि आफ्नो व्यापार गतिविधिहरु मार्फत तिनीहरूले Bitcoin स्वीकार गर्न सक्छन् त व्यापारी लागि समाधान प्रदान. एक एपीआई छेउमा सबैका लागि सकेसम्म सजिलो एकीकरण गर्न क्रममा, Spectrocoin व्यापारीहरू लागि र वालेट लागि वाणिज्य प्लगइन र पुस्तकालय प्रदान.
Bitcoin डेबिट कार्ड Bitcoin तुरुन्त आर्थिक सहायता छ, त्यसैले कुनै आवश्यकता भुक्तानीको अग्रिम मा cryptocurrency आदान प्रदान गर्न. भिसा र प्लास्टिक कार्ड संसारभरिका कुनै पनि एटीएम मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, को नामकरण आधार मुद्राहरू USD छन्, EUR र GBP. प्लास्टिक र भर्चुअल कार्ड दुवै भन्दा बढी मा स्वीकृत छन् 20 लाख साइटहरू र अनलाइन पसलहरूमा इन्टरनेट मार्फत. व्यापार मालिक सञ्चालनका लागि भुक्तानी Bitcoin स्विच गर्न को लागि पनि एउटा विकल्प प्रदान. Spectrocoin एक कदम अगाडि डिजिटल संसारमा निम्ति एक समाधान रूपमा कम्पनी कार्ड प्रदान गर्दछ.
Spectrocoin कार्ड - धेरै अन्य Bitcoin डेबिट कार्ड विपरीत - संसारको कुनै पनि देश पठाइएको छ, साथै अमेरिकी नागरिक लागि पनि र उपलब्ध भारत र चीन सहित. सामान्य ढुवानी यदि निःशुल्क र कार्ड मा आएको 3-4 सप्ताह. कसैले ढुवानी गति गर्न चाहनुहुन्छ भने, $ 75 / ?? 69 / £ 50 को एक अतिरिक्त शुल्क लागि तीब्रता ढुवानी विकल्प उपलब्ध छ. यस मामला मा कार्ड प्रयोगकर्ताको ?? को हात हुन सक्छ 4-5 दिन.
Spectrocoin जाँदा आफ्नो आर्थिक पुग्न आवश्यक गर्नेहरूका लागि स्मार्टफोन अनुप्रयोगहरू सिर्जना. र जो टी कि आवश्यक ?? थियो? को Spectrocoin वालेट गुगल प्ले मा पहुँच भइरहेको छ, अनुप्रयोग स्टोर र पनि विन्डोज स्टोरमा.
सेवा लग इन लागि दुई कारक प्राधिकरण प्रयोग. प्रमाणीकरण प्रक्रिया आफ्नो वेबसाइटमा राम्ररी विस्तृत छैन. प्रयोगकर्ता आफूलाई प्रमाणित गर्न, तिनीहरूले मान्य राहदानी वा आईडी कार्ड र एक उपयोगिता बिल प्रदान गर्नुपर्छ. को AML नीति कागजात विवरण प्रदान, तर आफै लिन्छ धेरै प्रक्रिया कसरी कुनै जानकारी छ सबै राम्रो जान्छ भने.
प्रमाणित प्रयोगकर्ताहरू अधिकतम आफ्नो Spectrocoin कार्ड लोड गर्न सक्नुहुन्छ 10000 USD एकैचोटि. Spectrocoin अनुमति दिन्छ अधिकतम2प्रति दिन एटीएम लेनदेन, को कुल रकममा 2000 अमेरिकी डलर. त्यहाँ POS उपयोगको लागि कुनै सीमा छ र प्रमाणित प्रयोगकर्ताहरूको लागि Spectrocoin POS लोड पनि सेवाहरू प्रदान गर्दछ. यदि Spectrocoin कार्ड प्रमाणित छ, यो PayPal र जुवा साइटहरु जस्तै तेस्रो पक्ष व्यापारीहरूसँग रकम प्राप्त गर्न सक्षम छ. कुनै पनि धन अप्रमाणित कार्ड प्राप्त छ भने, कार्ड प्रमाणित भइरहेको छ सम्म यी धन अवरुद्ध गर्दै.
अप्रमाणित प्रयोगकर्ता पनि Spectrocoin सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्छ, तर तिनीहरूले त्यसपछि केही सीमा उजागर गर्दै छन्. अधिकतम शीर्ष-अप रकम मात्र हो 2500 अमेरिकी डलर. एटीएम अप्रमाणित मा प्रयोगकर्ता मात्र झिक्न गर्न सक्षम छन् 200 एकल समयमा USD, 400 अधिकतम देखि USD दैनिक2लेनदेन. अप्रमाणित प्रयोगकर्ताहरूको लागि कुल एटीएम निकासी सीमा छ 1000 अमेरिकी डलर. अर्कोतर्फ, पनि अप्रमाणित प्रयोगकर्ता अनलाइन दोकान वा तिनीहरूको Bitcoin डेबिट कार्ड पैसा को असीमित रकम POS टर्मिनलहरु मा भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ. POS लोड सेवा अप्रमाणित प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध छैन.
बेलायत आधारित Spectrocoin मा शुरू गरिएको छ 2013. कम्पनी Landsdowne पङ्क्ति यसको मुख्यालय छ, लन्डन. तिनीहरूले मई मा Bitcoin डेबिट कार्ड जारी गर्न सुरु, 2015.
हुनत Spectrocoin वेबसाइटमा सीधा आफ्नो मालिक सूची छैन, पिचबुक र Linkedin अनुसार Bitcoin सेवा प्रदायक लिथुआनिया देखि तीन व्यक्तिहरूलाई स्वामित्वमा छ.
Vytautas Karalevičius Spectrocoin धन अघि, उद्योग मा वित्तीय विश्लेषक रूपमा विभिन्न भूमिकाको थियो. तेस्रो मालिक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अध्ययन मा धेरै डिग्री छ जो Mantas Mockevicius छ. Justas Dobiliauskas कारण गर्न सुरुवातमा मुख्य प्रविधि अधिकारी छ आफ्नो 6+ वर्ष अनुभव उद्यम सफ्टवेयर डिजाइन कम्पनीहरु मा एक डेभलपर s.
प्लास्टिक Bitcoin कार्ड लागत Spectrocoin $ 9.00 / ?? 8.00 / £ 6.00, जबकि भर्चुअल कार्ड मात्र $ 0.50 / ?? 0.50 / £ 0.50. मासिक सेवा शुल्क शुल्क पनि छ 1 प्लास्टिक र भर्चुअल दुवै कार्डहरू USD. खाता को ब्यालेन्स शून्य छ भने तर यो शुल्क चार्ज छैन. पनि, कुनै निष्क्रियता शुल्क छ, त्यसैले प्रयोगकर्ता कार्ड प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ अपेक्षाकृत सजिलो र सस्तो.
धन एक Spectrocoin खाता बाट आउँदै छन् यदि कार्ड को लागत लोड मुक्त छन्. अन्यथा लोड लागत प्रयोग विधि निर्भर: बैंक बाट स्थानान्तरण निःशुल्क छ तर क्रेडिट कार्ड मार्फत तिनीहरूले सम्म चार्ज 5%. कार्ड एक Bitcoin वालेटमा unloaded छ भने, यो लागत 0.5% प्रत्येक Bitcoin खरिद लेनदेन मा $ 1.00 / ?? 1.00 / £ 1.00 को न्यूनतम शुल्क संग. त्यसैले सानो रकम धेरै स्थानान्तरण प्रयोगकर्ताको लागि अन्त मा धेरै खर्च हुन सक्छ.
एटीएम प्रयोग गर्दा, Spectrocoin शुल्क 2.5 घरेलू मुद्रा निकासी लागि USD र 3.5 अन्य मुद्रा निकासी लागि USD. त्यहाँ पनि एक हो 3% मुद्रा विनिमय शुल्क भुक्तानी पूर्वनिर्धारित मुद्रा भन्दा अन्य बनेको छ भने चार्ज छ. कार्ड रकम प्राप्त गर्दा, को POS लोड शुल्क छ 1.99%.
Spectrocoin आफ्नो साइट मा उपलब्ध औसत Bitcoin विनिमय मूल्य प्रदान गर्दछ. यो Bitcoin मूल्य मा दिइएको छ 26 मुद्राहरू, धेरै ड्यास जस्तै सुनको मूल्य र altcoins सहित. को Spectrocoin Bitcoin मूल्य बजार मा स्वीकार्य बोली-प्रस्ताव औसत Bitcoin मूल्य को दायरा भित्र छ.
वितरण 3-4 सप्ताह तत्काल
मासिक सेवा शुल्क शुल्क ** $1.00/€ 1.00 / £ 1.00 $1.00/€ 1.00 / £ 1.00
कार्ड शीर्ष अप SpectroCoin खाता बाट 0% 0%
Bitcoin वालेटमा कार्ड (Bitcoin खरीद) 0.5% + $1.00/€ 1.00 / £ 1.00 0.5% + $1.00/€ 1.00 / £ 1.00
घरेलू मुद्रामा एटीएम निकासी $2.5/€ 2.25 / £ 1.75 –
अन्य मुद्राहरुमा एटीएम निकासी $3.50/€ 2.75 / £ 2.25 –
3Rd पार्टी लोड 1.99% 1.99%
सामान्य ढुवानी (सम्म 3-4 सप्ताह) मुक्त –
तीब्रता ढुवानी (4-5 दिन) $75/€ 69 / £ 50 –
प्रयोगकर्ता अनुभव Spectrocoin
Spectrocoin को मंच एक निष्खोट डिजाइन नीलो र पहेंलो शैली छ. मूल्य निर्धारण तालिका जस्तै टेबल को पढाइ सुख ​​गर्न, को चुच्चा पङ्क्तिहरू जोड दिंदै संग जोड छन्. सानो कुरा, एक प्रयोगकर्ता धेरै पङ्क्तिहरू एक अंगालो तालिका देख छ भने तर धेरै मद्दत गर्छ.
को Bitcoin मूल्य खण्ड मा, त्यहाँ दिइएको TIMEFRAME लागि Bitcoin मूल्य देखाउने चार्ट छ. प्रयोगकर्ता सजिलै ऐतिहासिक मूल्यहरु कुनै पनि चार्ट सिधै पढ्न सक्नुहुन्छ 26 मुद्राहरू.
Spectrocoin वेबसाइट हुनत सेवाहरूमा जानकारी धेरै प्रदान गर्दछ, अझै पनि सबै समावेश गर्दैन सजिला सम्भावित भविष्य प्रयोगकर्ता हुन सक्छ कि. को सोधिने प्रश्न खोजी कार्य प्रदान गर्दैन. प्रमाणिकरण समय विस्तृत छैन. कम्पनी को मालिक साइट सूचीकृत छैन. एक्लै यी जानकारी पनि महत्त्वपूर्ण जस्तो छैन, तर एक प्रयोगकर्ता कुरा खोज्दै गर्दा र फेला पार्न सक्नुहुन्छ, यो निराशा हुन सक्छ. तर यी अवस्थाहरू लागि हट लाइन र समर्थन suffice गर्न सक्षम हुनुपर्छ.
थप्नका लागि एउटा रोचक महत्त्वपूर्ण बिन्दु Spectroin को Google खोज परिणाम हो. जस्तै केही प्रयोगकर्ताहरूले Bitcoin मंच मान्छे Spectrocoin bitcoins ताला र प्रश्नहरु प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन बारे उजुरी बारेमा केही खुला विषय छ रूपमा कम्पनी संग मुद्दाहरू थियो देखिन्छ. त्यसैले द्वारा Spectrocoin टाढा यी ​​शुल्क मा आफूलाई बचाव छैन. यो एक Bitcoin विनिमय खाताहरू मा bitcoins कहिल्यै सुरक्षित छ भनेर चिरपरिचित छ, त्यसैले हामी सुरक्षित आफ्नो bitcoins भण्डारण गर्न सबैलाई प्रोत्साहन.
प्रिपेड कार्ड सीमाहरू Bitcoin
प्रति दिन शीर्ष-अप को अधिकतम नम्बर 2
प्रति खरिद अधिकतम शीर्ष-अप रकम $10,000/€ 10,000 / £ 8,000
प्रति दिन अधिकतम शीर्ष-अप रकम $20,000/€ 20,000 / £ 16,000
POS लोड *** कुनै सीमा
अधिकतम जीवनकालमा लोड कुनै सीमा
प्रति दिन एटीएम लेनदेनको अधिकतम नम्बर 5
अधिकतम एकल एटीएम निकासी $1,000/€ 1,000 / £ 800
प्रति दिन अधिकतम एटीएम निकासी $2,000/€ 2,000 / £ 1,600
कुल एटीएम निकासी सीमा कुनै सीमा
प्रति दिन अधिकतम POS रकम (पसलहरूमा) कुनै सीमा
अधिकतम संख्या प्रति दिन वालेट लेनदेन Bitcoin गर्न माल सामान उतार्नु 2
न्यूनतम वालेट Bitcoin गर्न माल सामान उतार्नु $2/€2/ £ 2
अधिकतम वालेट Bitcoin गर्न माल सामान उतार्नु $2,250/€ 2.250 / £ 2,000
कार्डबाट कुल जीवनकालमा माल सामान उतार्नु कुनै सीमा
प्रयोगकर्ता Bitcoin लागि जटिल सेवाहरू प्रदान Spectrocoin. यो Bitcoin डेबिट कार्ड सबै प्रयोगकर्ताहरू विश्व-विस्तृत डेबिट कार्ड कम्पनीहरु Bitcoin सबैभन्दा अमेरिकी नागरिक समर्थन गर्दैन रूपमा ठूलो समर्थक छ जसको लागि उपलब्ध छन्. प्रयोगकर्ता आधार पनि छ कि छैन अन्य Bitcoin डेबिट कार्ड प्रदायकहरू मा संभावना विन्डोज मोबाइल प्रयोगकर्ता विस्तार गरिएको छ. सेवा र मूल्य निर्धारण अपेक्षाकृत सभ्य छ हुनत, ढुवानी महंगा छ र इन्टरनेट वरिपरि उजुरी furure प्रयोगकर्ताहरूले मंच देखि तर्साउन सक्छ.